Uthembisa esezingeni lomhlaba i-DVD – Maskandi Media
Uthembisa esezingeni lomhlaba i-DVD
UMthandeni Gcokama elisha Manqele usethathe inxaxheba yokuthuthukisa umculo wakhe kanye negama lakhe endimeni yomculo. Ukwenze lokho ngokusiza abafana abamgidelayo ukuthi kube necwecwe abazoveza kulona ikhona labo.
Leli cwecwe elibizwa ngomacekeceke kulindeleke ukuthi liphume maphakathi nonyaka. Belunakaziwa usuku elizophuma ngalo njengoba ebhizi futhi ezama ukukhipha i-DVD
esezingeni lomhlaba. “Ngizimisele ngokushiya igama lami liphezulu namhla uJehova engikhumbula. Inhloso yami mhla ngifika kulo mculo kwakungukujabulisa abantu. Okuningi sengikwenzile izwe likubonile namanje lisakubona ngoba angimile ngiyaqhubeka”.
“Ngisezinhlelweni zokusiza oMshovo ukuthi bavelele nabo njengami. Angifisi ukuthi lezi nsizwa zigcine zingaziwanga kule ndima ngoba sibambisene kahle kakhulu nazo”.
“Ngizokhipha i-DVD kungekudala nje. Lapho ngizohlanganisa onke noma amaningi ama-hit kaMthandeni ukuze izwe lonke libone ukuthi ngibizelwe kulento. ANgifuni kube intwanyana nje kodwa ngifuna kube i-DVD yomhlaba. NGingumuntu obhizi nozimiselayo ngomsebenzi wakhe”.
“Ngizocela ukwazisa izwe lonke ukuthi leyo DVD ngizofisa ukubona abathandi bomculo wami bevela begqoke kahle behlobile ngendlela abagqoka kahle ngayo ngoba vele ingene shi lento kubona. Ngizoqinisekisa ukuthi bayavela ukuze behlale bebonwa beze beyobonwa nayizizukulwane zabo ukuthi lento yafika nathi ngoba phela ivideo ayiphuphi”.
Previous Previous post: Bathokozile ngokuthengwa kwecwecwe labo
Next Next post: Lihluleke lancama Igcokama ku-live